I-Semalt inikeza ama-SEO Amathiphu Amabhizinisi E-Commerce
Iqiniso elingenakuphikwa ukuthi abantu abaningi bayashintshaukuyothenga nge-intanethi ngenxa yokuthi kulula, ukuhlukahluka futhi kuyakwazisa. Ukuze uhlale usebenza esikhaleni esiphezulu se-intanethi, i-ecommerceizinkampani kufanele zize nezindlela zokudala zokuheha abadayisi be-intanethi. Njengoba kunjalo, i-SEO isaqhubeka indima ebalulekile ekusakazeniisu lamakhamphani e-ecommerce.
Isazi esiholela phambili i-Semalt Amasevisi weDivaysi, uJason Adler unikeza amathiphu angu-8 azokwenza ibhizinisi lakho le-ecommerce likhule.
# 1: Yakha iwebhusayithi ekhangayo ye-ecommerce
Lena empeleni isinyathelo esiyisisekelo - istick 40 watt atomizer low eleaf. Ibeka isisekelo sayo yonke intookunye okulandelayo. Qiniseka ukuthi iwebhusayithi yakho ye-ecommerce ilula ukuhamba, ukuhlanganyela nokuphendula. Ngale ndlela amaklayenti akho azogcinaukubuyela emuva ukuthenga nawe.
Ungabeki ikhanda lakho uma ungenalo amakhono okusetha iwebsite ye-ecommerce. Izinkampani ezifana ne-Semalt zizokusiza ukwakha iwebhusayithi edayisa kahle. Ngaphezulu kwalokhu, bazohlanganisa ukuphephauhlelo lokuhlola, isistimu yokulandelela kanye nokuphatha, nokudala okuqukethwe okuzokwenzela amaklayenti kuwe. Kukhona ngisho nethuluzingokugcina ithrekhi ye-web traffic kanye nokuguqulwa ukukala ukusebenza kwewebhusayithi ye-ecommerce.
# 2: Ukuxhaphaza isici seselula sewebhu ye-ecommerce
Ngo-2015, uMthengisi we-intanethi ubale ukuthi u-$ 104.5 billionesetshenziselwa ukuthengiswa kwama-ecommerce ehamba phambili. Izibalo kulindeleke ukuba ziqhubekele phezulu kuze kube yilapho kuzuza khona lokhu. Konkeiqala ngokuklama iwebhusayithi yakho yokuthengisa: qinisekisa ukuthi ilungiselelwe ukugijima kumajejethi weselula. Gcina izikhangiso ze-flash kanye nama-pop ups.
# 3: Ucwaningo, ucwaningo, ucwaningo
Ucwaningo ukuthi yiluphi uhlobo lokuqukethwe okufanele ulubeke futhi oluqondileamagama angukhiye / imisho emakethe yakho ehlosiwe oyithandayo. Zama ukuthola ukuthi amaklayenti akho achofoza yini futhi enze lokho kungcono. Gxilaukunaka kwakho emakhasini okufika, ikhasi lasekhaya kanye nekhasi lomkhiqizo liqaphela ukuthi lilinganisa kanjani i-Google algorithm. Akulimazi ukuhlolaukuthi yini ukuncintisana kwakho.
# 4: Dala izixhumanisi ezifanele
Izixhumanisi ezifakiwe zidlala indima ebalulekile ekusakazeni i-ecommerce yakhoiwebhusayithi. Bheka ababhulogi abangase bafune ukuxhuma kwimikhiqizo yakho noma iwebhusayithi kanye neqembu ndawonye nabo. Ungathola futhi izibuyekezo zakhoimikhiqizo kwimidiya yezenhlalo futhi engeza izixhumanisi ezifakiwe kwiwebhusayithi yakho ye-ecommerce. Kukhona amathuluzi angaphezu kuka-60 ongayisebenzisa ukuze usebenzise leli qhinga.
# 5: Dala okuqukethwe okusha
Iwebhusayithi yakho ye-ecommerce kufanele ibe ngaphezu kwekhasi lemikhiqizoizincazelo ezicacile. Yenza iphuzu lokudala nge-blog yethu bese uthumela okuqukethwe okusha, okuqondisisa. Ungazama umhlahlandlela wesiphoamaholidi ahlukene aphakamisa imikhiqizo onayo ekuthengiseni.
# 6: Cela ukubuyekezwa kwamakhasimende
Ukubuyekezwa kwamakhasimende kungakhethi ukwakha kuphela kodwa futhi, kukhuliseSEO. Cabanga ngale ndlela: ukubuyekezwa okungaphezulu okutholayo, okuqukethwe okwengeziwe (okusha) okutholayo.
# 7: Yenza ukuhlolwa kwewebhu njalo
Kuvamile ukwenza amaphutha. Njengoba okuqukethwe okuningi namakhasi wewebhu kukhonawengeze, uma usuvele ulungele ukuba namaphutha. Hlola amathegi alahlekile, izikripthi, ukuqondisa, amakhasi aphindaphindiwe, izixhumanisi ezifile, ezingekhoizithombe nanoma yikuphi ukuphutha ngokuqhuba isheke sekota kwiwebhusayithi ye-ecommerce. Sebenzisa amathuluzi mahhala ukuhlola ijubane lokulayisha,ukuphepha kwewebhusayithi nokunye okuningi.
# 8: Yakha ibutho lamathonya
Hlanganisa ne-blogger bese ubhala ngokubhala nge-ecommerce yakhoiwebhusayithi, imikhiqizo nokubuyekezwa. Qala umkhankaso wezokuxhumana womphakathi ukuthuthukisa i-SEO yakho kanye nomgwaqo wewebhu.
Ukusebenzisa lawa macebiso, ungakha ukwakha okunamandla ku-intanethi.Izincintiswano zakho zizoshiywa phansi ngokushaqeka.